ဥရောပတလွှားမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှု နှုန်း ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်တိုးလာ နေတာကို နောက်တချီ စတွေ့ နေရပြီ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဥရောပ အစိုးရတွေအနေနဲ့ ဒါကို ပေါ့ပေါ့မထားပဲ သတိပေးချက် အနေနဲ့ အရေးယူ ဆောင်ရွက်ကြဖို့ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ကြီးက ကြာသပတေးနေ့မှာ သတိပေးလိုက်ပါတယ်။
Copenhagen မှာ ပြုလုပ်တဲ့ အွန်လိုင်း သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ WHO ရဲ့ ဥရောပဆိုင်ရာအကြီးအကဲ Dr. Hans Kluge က ပြောကြားရာမှာ ဒီရောဂါကူးစက်မှုနှုန်း ဟာ အသက် ၂၅ နှစ်နဲ့ ၄၉ နှစ်ကြား အရွယ် တွေမှာ ပိုမြန် ကြောင်းနဲ့. သက်ကြီးရွယ်အိုတွေမှာလည်း ကူးစက်မှု အမြန်တိုးလာနေတာကို WHO က တွေ့ရကြောင်း ပြောကြားခဲ့တာပါ။
အခုလို ကူးစက်မှုထိုးတက်လာတာဟာ ဒီရောဂါရှိမရှိ စစ်ဆေးမှုတွေ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပိုပြီး လုပ်လာနိုင်တာကြောင့် ဖြစ်ပေမယ့် ဒါဟာ ဒေသတလွှား ကူးစက်မှုက ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင် များနေတာကို ပြနေတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
ဥရောပဒေသတွင်း နိုင်ငံတွေ အနေနဲ့ Quarantine လုပ်သီးခြားခွဲနေခိုင်းတဲ့ ကာလကို ရက်နဲနဲပဲ သတ်မှတ်တာတွေ မလုပ်ဖို့နဲ့ ရောဂါပိုးမပျံ့ နှံ့ အောင် ချထားတဲ့ ကန့်သတ်မှုချရာမှာ တသမတ်ထည်း လုပ်ဆောင်ဖို့လည်း Kluge က ဥရောပနိုင်ငံတွေကို တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
ဥရောပတလှား ကိုဗဈကူးစကျမှုတိုးလာတဲ့အပျေါ WHO သတိပေး
ဥရောပတလှားမှာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျပြံ့နှံ့မှု နှုနျး ကွောကျစရာကောငျးလောကျအောငျတိုးလာ နတောကို နောကျတခြီ စတှေ့ နရေပွီ ဖွဈတဲ့အတှကျ ဥရောပ အစိုးရတှအေနနေဲ့ ဒါကို ပေါ့ပေါ့မထားပဲ သတိပေးခကျြ အနနေဲ့ အရေးယူ ဆောငျရှကျကွဖို့ WHO ကမ်ဘာ့ကနျြးမာရေး အဖှဲ့ကွီးက ကွာသပတေးနမှေ့ာ သတိပေးလိုကျပါတယျ။
Copenhagen မှာ ပွုလုပျတဲ့ အှနျလိုငျး သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲမှာ WHO ရဲ့ ဥရောပဆိုငျရာအကွီးအကဲ Dr. Hans Kluge က ပွောကွားရာမှာ ဒီရောဂါကူးစကျမှုနှုနျး ဟာ အသကျ ၂၅ နှဈနဲ့ ၄၉ နှဈကွား အရှယျ တှမှော ပိုမွနျ ကွောငျးနဲ့. သကျကွီးရှယျအိုတှမှောလညျး ကူးစကျမှု အမွနျတိုးလာနတောကို WHO က တှရေ့ကွောငျး ပွောကွားခဲ့တာပါ။
အခုလို ကူးစကျမှုထိုးတကျလာတာဟာ ဒီရောဂါရှိမရှိ စဈဆေးမှုတှေ ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ ပိုပွီး လုပျလာနိုငျတာကွောငျ့ ဖွဈပမေယျ့ ဒါဟာ ဒသေတလှား ကူးစကျမှုက ကွောကျစရာကောငျးလောကျအောငျ မြားနတောကို ပွနတေယျလို့လညျး ပွောပါတယျ။
ဥရောပဒသေတှငျး နိုငျငံတှေ အနနေဲ့ Quarantine လုပျသီးခွားခှဲနခေိုငျးတဲ့ ကာလကို ရကျနဲနဲပဲ သတျမှတျတာတှေ မလုပျဖို့နဲ့ ရောဂါပိုးမပြံ့ နှံ့ အောငျ ခထြားတဲ့ ကနျ့သတျမှုခရြာမှာ တသမတျထညျး လုပျဆောငျဖို့လညျး Kluge က ဥရောပနိုငျငံတှကေို တိုကျတှနျးခဲ့ပါတယျ။